स्ट्यान्ड अप पाउचको उत्पादन प्रक्रिया - समाचार - फोशन रिजिंग टेकट्रॉनिक प्याकेजिंग सामग्री कं, लिमिटेड।
पाउच स्ट्यान्ड अप पाउचको उत्पादन प्रक्रिया
१. मुद्रण प्रक्रिया
यदि तपाईं एक उत्कृष्ट उपस्थिति चाहानुहुन्छ, उत्कृष्ट योजना आवश्यक छ, तर प्रिन्टि the प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण छ। खाना प्याकेजि bags ब्यागहरू प्राय: खानालाई सिधा स्पर्श गर्दछन्, त्यसैले मुद्रण सर्तहरू पनि धेरै कडा छन्। यो मसी वा विलायक हो, यो खाना निरीक्षण नियमहरूको पालना गर्नु पर्छ।
२. स्ट्यान्ड अप पाउच निर्माणकर्ताहरूको समग्र प्रक्रिया
धेरै खाना प्याकेजि bags झोलाहरूले एक कम्पोजिट संरचना प्रयोग गर्दछ, जसलाई प्याकेजि material्ग सामग्रीलाई गर्मी-सिलेबिलिटी बनाउने फाइदा हुन्छ, र खाना प्रदूषण रोक्नको लागि मसी लेयर रोक्न सक्दछ। त्यहाँ यौगिकका धेरै प्रकारहरू छन्, र सामान्यतया प्रयोग गरिने कम्पाउन्डिंग विधिहरू मुख्यतया सोल्भन्ट-फ्री कम्पाउन्डिंग, सुख्खा कम्पाउन्डिंग र एक्सट्रुजन कम्पाउन्डिंग हुन्। बिभिन्न मिश्रित विधिहरूका बिभिन्न फाइदाहरू र नोक्साहरू हुन्छन्, जुन सबै खाद्यान्न निर्माताहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ।
The. परिपक्वता प्रक्रिया
के यो द्रुतघाती प्रक्रिया पछि तुरुन्तै प्रशोधन गर्न सकिन्छ? असमर्थ मिश्रित गोंद पूर्ण रूपमा सुख्खा नभएको हुनाले, यस समयको समग्र सामर्थ्य एकदम कम छ, र डाटा एकदम सरल छ र डिलेमिनेसन देखाउनेछ। यस समयमा, परिपक्व प्रविधिको माध्यमद्वारा समग्र बललाई सुदृढ पार्न आवश्यक छ। तथाकथित परिपक्वता भनेको डाटालाई प्राकृतिक रूपमा एक तुलनात्मक स्थिर तापमानमा भण्डारण गर्न अनुमति दिन (सामान्यतया degrees० डिग्री भन्दा बढी), सामान्यतया एक पटकमा केही घण्टाको लागि दशौं घण्टाको लागि, र यसको कार्य गोंद सुक्ने प्रक्रियालाई छिटो पार्नु हो। र समग्र सामर्थ्य बढाउनुहोस्।
4.पाउच खडाफ्याक्ट्री स्लिटिंग र झोला बनाउने प्रक्रिया
सामान्यतया, परिपक्वता समय पर्याप्त भएपछि, निर्दिष्ट आकारको स्लिटिंग र झोला बनाउने प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ। स्लिटिंग भनेको ठूलो रोलबाट सानो रोलहरूमा काट्नु हो, जुन खाद्य निर्माताहरूले स्वचालित मेशिनहरूमा प्याक गर्न सजिलो हुन्छ; झोला बनाउने ग्राहकको आवश्यकता अनुसार एक झोला बनाउने मेसिनले लक्षित ब्याग आकार बनाउनु हो।
उत्कृष्ट उत्पादन गुण नजिकको निरीक्षण कार्यहरूको कडाईसँग सम्बन्धित छ। उत्पाद समाप्त भएपछि, यसले दोषपूर्ण उत्पादनहरू हटाउन धेरै म्यानुअल निरीक्षण कार्यहरूको माध्यमबाट जानुपर्दछ। निरीक्षण पास गर्नुहोस् र उत्पाद प्रतिभा ग्राहकलाई दिनुहोस्।
अघिल्लो:अधिकांश व्यक्तिहरूको पाउच छनौट गर्दछन्
अर्को:कस्तो प्रकारको कागज ब्यागहरू कुन प्रकारको उत्पादन प्याकेजि .को लागि प्रयोग गरिन्छ